नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै भिभोको रेनिक्याम्पियन अफर
चैत ३०, काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी भिभो स्मार्ट फोनले देशव्यापि रुपमा रहेका खुद्रा आउटलेटहरुबाट ग्राहकहरुलाई अत्याधिक छूटका साथमा उत्साहजनक उपहार अफर ल्याएको छ । यो क्याम्पियन अप्रिल ७ देखि २५ अप्रिल २०२१ सम्म रहने भएको छ ।
यस क्याम्पियन अन्तर्गत भिभोको भि सिरिज ह्यान्डसेट जस्तै भि२० (८ जिवि + १२८ जिवि), भि२० एसई (८ जिवि + १२८ जिवि) तथा वाई सिरिज स्मार्टफोनको वाई५१ (८ जिवि + १२८ जिवि) वाई१२ (३ जिवि + ३२ जिवि) वाई९१ सि (२ जिवि + ३२ जिवि) मा उत्साहजनक तथा भव्य छूट ल्याएको कम्पनीले बताएको छ ।
भिभो भि२० को पर्चेच प्राईस ड्रप रू. ३ हजारमा उपलब्ध हुनेछ । भिभो भि२० खरीद गर्ने पहिलो १०० जनाले गेमिङ हेडफोन जित्नेछन् । त्यस्तै, भिभो भि२० एसई खरीद गर्ने १५० जनाले ब्लुतुथ स्पिकर, भिभो वाई२ (३ जिवि + ३२ जिवि) को सबै खरीदकर्तालाई पर्चेच प्राईस ड्रप रू. १ हजारमा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यस्तै, ग्राहकहरुले भिभो वाई९१ सि रू. २ हजारमा पाउन सक्नेछन् भने भिभो वाई१२ एसमा रू. १ हजार छूट, वाई२० (४ जिवि + ६४ जिवि), वाई२० एस, वाई५१ स्मार्टफोन किन्ने १ हजार ७०० ग्राहकहरुले यस सिजनको आईपिएल जर्सि जित्ने मौका पाउने भएका छन् ।
प्रथम क्रेता र यस्तै भाग्यशालि विजेताहरु बन्नका लागि ग्राहकले एकपटक फोन एक्टिभ एगरेर भिभोको सफ्टवयरमा स्कान गरेपछि छनौट हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
आईपिएल जर्सी, गेमिङ हेडफोनहरु तथा ब्लुतुथ स्पिकरहरुमा २५५ टिडिएस लाग्नेछ यधपी यो टिडिएस रकम भिभोले भुक्तानी दिनेछ ।
वाई १२एस को छूट अफर र बम्पर प्राईज यो नयाँ वर्षको लागि मात्र मान्य रहनेछ भने यो योजना अप्रिल ७ देखि २५ अप्रिल २०२१ सम्म मात्र लागू रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, प्राईस ड्रप क्याम्पियन भने नयाँ वर्षको क्याम्पियन सकिएपछि पनि लागू रहनेछ र उपभोक्ताले भिभोको अत्याधुनिक प्रविधिको अनुभव सहुलियत मूल्यमा लिने अवसर प्राप्त गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।